के तपाई जीवनमा खुसी रहन चाहनुहुन्छ ? यी कामहरु गर्नुहोस् - Nepalpatra Nepalpatra के तपाई जीवनमा खुसी रहन चाहनुहुन्छ ? यी कामहरु गर्नुहोस् - Nepalpatra
जीवनमा खुसी रहन के गर्नुपर्छ ? आखिरमा खुसी के हो ? मानिस कसरी खुसी हुनसक्छ ? यी यावत् कुराको प्रश्न हरेक मानिसको मानसपटलमा घुमिरहेको हुन्छ । भनिन्छ जीवनलाई प्रेम गर्नेहरू जहिले खुसी हुनुका साथै उनीहरूमा खुसीका तरङ्ग एकाएक उब्जिरहने गर्छ र खुसी हुन्छ । जब मान्छे एकदमै खुसी हुन्छ तब मात्र मन पनि खुसी हुन्छ । उसमा एकाएक खुसीको मीठो भाव एकाकार हुन्छ । खुसी हुने मान्छे फूलजस्तै सुन्दर र स्वच्छ हुन्छ ।
समाजको प्रत्येक मनुष्य खुसी भई जीवन बिताउन चाहन्छ । आफ्नो जीवनलाई खुसी बनाउन नै मानिसहरु दिनरात तल्लिन हुन्छन् । तर धेरैले जीवन जिउने तरिका नजानेर दुःखी हुन्छन् । मनदेखि प्रसन्न ब्यक्ति शारीरिक रुपमा पनि स्वस्थ हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
हामी भित्र रहेका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई हाम्रो खुसीले प्रभाव पार्छ । प्रेम, अधार, अनुग्रह, आनन्द जस्ता सकारात्मक भावनाले हाम्रो जीवनमा खुसी लयाउँदछ भने नकारात्मक भावनाहरू जस्तै घृणा, रिस, इर्श्या, इख, गुनासो आदिले हामीलाई दुखित तुल्याउँछ । जीवनमा खुसी रहन चाहनुहुन्छ भने यी कामहरु गर्नुहोस् ।